သိန်း 1000 နှင့်အထက် မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျရှိရောငျးရနျတိုကျခနျးမြား
Swe Daw City condo for rent
1,000,000 သိနျး (ကပျြ)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8797946 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
2.5 RC တိုကျသဈနှငျ့အဆောငျတှဲလကျြရောငျးမညျ့
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8648947 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အိမျ နှငျ့ ခွံရောငျးမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8529213 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8476469 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးမဂျလာဒုံမွို့နယျခရမှေနျအိမျရာ(1)55x75. 2RC. master(2)sanig(3)အမညျပေါကျဒေါငျ့ကှကျနရောကောငျးအမွနျရောငျးမညျသိနျး2800. ph09699261984. 09253581...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8816912 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်